Tahriibka - Hoygamaansada
by Ayaanle Abdirahman Qoyste
Anigoon ku taag taagsanin'oo Qar ka tuurin maansada Toogteydi weeyee Aan dhorw tuduc ka taabto Tiiraanyo ooyo maantaba. Dhib la'aan ma timaadee Ilintan dhabankeyga taaliyo Tabaalahan i heysta Waxa igu talaalay Tacadiga tahribka weeyoo Anbiyey tiirkii qaranka iyo Dhalintan tirsanaayey. Murug baa is daba taaloo Ilin hooyaa tif tiri Kolkuu tamaniyey Key ku tacab beeshay Inuu hilibkisa u tuuro Caddow tacadi bada naftiisa. Haku taamin tahriibkoo Ha tuhmin marnaba Libintiisu in ay tahay Tamshleyn iyo farxade Tilmaantiisu waa Tacdiyo dhiibaatee Naftada ha u tuurin Ma gafe tuug ahiyo Cadaw tacadi bada naftaada. tu'na haku tashanina In ay ku baahi tirtoo Taajir ku noqotaa Tasiilaad dhaqaaliyo Dhismo tayo lahoo Nin kale tusmeysto Dhidibada u taagtay Ogow Tiisii weeyoo Adaa kaagii ka tagayoo Tashuus baday naftaadee. Tolla'yeey dhalinyaroy Darajo ma ahan tahriibke isku geeya taaloo Tufta qur'aankiyo Imaankina toosiyoo Qorshahaa Ka tanaasuloo Baajiya tiiraanyada Aan mar qura tilaabsano Gurano tacabka beerahiinee.